QM oo cunna qabateynta hubka ku kordhisay Soomaaliya | Somsoon
Home WARAR QM oo cunna qabateynta hubka ku kordhisay Soomaaliya
QM oo cunna qabateynta hubka ku kordhisay Soomaaliya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa kordhiyay xayiraada hubka ee saaran Soomaaliya, iyo ka ganacsiga dhuxusha sharci darada, oo kamid ah meelaha ugu waawayn oo ay Al-Shabaab dhaqaalaha ka helaan.
Muddo kordhintay waxay timid kadib sadex maalmood oo ay warbixin kale soo saareen gudiga qoborada Qaramada Midoobey ee sida gaarka ah Soomaaliya u qaabilsan.
Codeenta qaraarkan ayaa waxaa soo gudbiyay dowladda Britain kaas oo jimcihii loo codeeyay, waxaana ka aamusay meel marinta qaraarkaas wadamo ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha.
Qaraarka ayaa lagu cambaaray’yay weerarda dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka gaystaan gobolka gaar ahaan gudaha Soomaaliya, iyagoona golaha muujiyay walaacooda ku aadan qatarta kooxdan xiriirka laleh urur waynaha Al-Qaacida.
Qaraarka ayaa sidoo kale lagu cambaaray’yay hubka lageeyo gudaha Soomaaliya, iyo askareenta qasabka ah oo ay sameeyaan al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubeesan kuwaas oo ku sugan gudaha dalka , in cunaqabteynta hubka ee Soomaaliya lagu xadgudbay uuna jiro qul qul ayey raaciyeen warbixinta.
Golaha ammaanka ayaa sido kale waxay sheegeen in Al-shabaab ay korortay qatarteeda gobolka isla markaana ay kordhiyeen ilahooda dhaqaale.
Al-Shabaab waxay bilaabeen qaraxyada guryaha lagu sameeyo , waana qatar weyn ayaa lagu yiri warbixinta la hor keenay golaha.
Sidoo kale waxaa lasoo jediyay in goluhu xanibaad saaro helitaanka waxyaabaha kiimikada ah ee laga sameeyo qaraxyada.
Ka ganacsiga dhuxusha ee sharci darada si weyn loogama hadlin warbixinta balse waxaa lagu sheegay in wali ay tahay mid jirta kana mid ah meelaha ugu muhiimsan ee dhaqaaluhu ka soo galo Al-Shabaab.
Danjiraha Soomaaliya ee xarunta Qaramada Midooney Abuukar Baalle ayaa shalay ku tilmaamay in golaha ammanka Qaramada Midoobey uusan rabitaanka Soomalaiya ee ah in gabi ahaanba laga qaado cunna qabteynta hubka ee saareen mudada dheer.
Article horeC/kariin Guuleed oo soo saaray baaq ku socda DF, Mucaaradka iyo guud ahaan shacabka
Article socoda Roger Stone oo lagu helay dambiyadii lagu eedeeyey